सरकार सर्वसत्तावादतिर : कोइराला | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / सरकार सर्वसत्तावादतिर : कोइराला
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, फोटो ग्यालरी July 24, 2018	0 224 Views
बाके  । नेपाली कांग्रे सका के न्द्रीय सदस् य डा. शे खर को इरालाले सरकार सर्वसत्तावादतिर अघि बढे को बताउनुभएको छ ।
प्रे स युनियन बाके ले सो मवार बिहान ने पालगञ्जमा आयो जना गरे को पत्रकार भे टघाटमा बोल्दै के न्द्रीय सदस्य डा. को इरालाले कर्णाली स् वास् थ्य प्रतिष्ठानमा अनशन बसे का व्यक्तिलाई जबर्जस्ती उठाउने , उपकुलपतिलाई प्रहरीले समाते र प्रधानमन्त्रीसमक्ष लै जाने , ट्रमा से न्टरमा बिरामी हे रिरहे का व्यक्तिलाई समाते र गृहमन्त्रीसमक्ष पु¥याउने , कानून सम्मत अघिल्लो सरकारले गरे का निर्णयहरु उल्ट्याउने , माइतीघर मण्डलालाई निषे धित क्षे त्र घो षणा गनेर् गतिविधिले सरकार सर्वसत्तावादतिर अघि बढे को दे खिएको बताउनुभयो  ।
‘दुई तिहाइको सरकार छ । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सरकारको दम्भ छ । लो कतन्त्रमा एकजना भए पनि विरो धीको स् वर सुन्नुपर्छ’– डा. को इरालाले थप्नुभयो – ‘यस् तै दम्भ रहे ओ लीको हालत पनि अरुको जस्तै हुन्छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शे रबहादुर दे उवाले ल्याएको अध्यादे शलाई ओ ली सरकारले अगाडि बढाएकाले त्यसलाई संसदमा छलफल गराएर पारित गरी विधे यक बनाउदा डा. के सीको माग सम्बो धन हुने डा. को इरालाको भनाइ थियो  । उहाले डा. के सीलाई मो हरा बनाएर कांग्रे सले आन्दो लन थाले को कुरा गलत भएको बताउनुभयो  ।
डा. को इरालाले सरकारको राम्रो कुराको कांग्रे सले समर्थन गरिरहे को उल्ले ख गर्नुभयो  । ‘ओ लीले पानी जहाज, रे ल ल्याउ“छु भन्नुभएको छ । त्यो छिटो ल्याउनुस् हामीले पनि भनिरहे का छौ ं’– डा. को इरालाले भन्नुभयो – ‘समृद्धि निर्माणमा हामीले सहयो ग गछौर् ं । आन्दो लनमा जाने हाम्रो रहर हो इन ।’
डा. को इरालाले कांग्रे सको वर्तमान ने तृत्व विधि र विधानसम्मत नहिडे को टिप्पणी गर्नुभयो  । ‘पार्टीलाई विधि र विधानसम्मत चलाउनुपर्छ भने र हामीले भनिरहे का छौ ’– डा. को इरालाले भन्नुभयो – ‘पार्टीलाई तदर्थवादमा चलाउन पाइदै न ।’
नजिकिदो १४ औ ं महाधिवे शनमा तपाइपार्टीको सभापतिको उम्मे दवार हो ? भन्ने प्रश्नमा डा. को इरालाले हास्दै अहिले नै त्यो भन्ने बे ला नआएको बताउनुभयो  ।
पत्रकार सम्मे लनमा रहे का अर्का के न्द्रीय सदस्य प्रदीप पौ डे लले सरकार यही रवैयाले अघि बढे मा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपनेर् बेला आउने चे तावनी दिनुभयो  । उहाले सरकारको पछिल्लो गतिविधिले लो कतन्त्र गुम्ने खतरा रहे को भन्दै चिन्ता गर्नुभयो  । के न्द्रीय ने ताहरु वीपी जयन्ती मनाउन ने पालगञ्ज आएका आएका थिए ।
Previous: प्रधानमन्त्रीले भने –‘प्रतिपक्षमा बस्दा अधिनायकवाद देख्ने कांग्रेसको परम्परा’
Next: आफ्नै लगानीमा सडकका बेर्ना स्याहार